သားကြောဖြတ်ခြင်းအကြောင်း တစေ့တစောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » သားကြောဖြတ်ခြင်းအကြောင်း တစေ့တစောင်း
Posted by AKKO on Mar 6, 2012 in Health & Fitness, Parenting & Pregnancy |6comments
ခဏခဏ ကြုံနေရတဲ့ ပြသနာတွေထဲက တစ်လောက ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေရဲ့အကြောင်း ရေးပြပြီးပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ သားကြောဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတအကြောင်း အနည်းငယ်ရေးပြပါဦးမည် ။ စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျပြီး ၊သားသမီးလည်းများ ၊ အကာကွယ်အတားဆီလည်း မသုံးနိုင်တဲ့ မိသားစုမျိုးအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည် ။ လွဲမှားစွာ အသုံးပြရန် ၊ အဓိပ္ပါယ်အကောက်မှားစေရန် မရည်ရွယ်ပါ ။
ရှင်လောင်းလှည့်သလို ဆူညံပူညံဖြင့် ဘုစုခရုလူတစ်စု ဆေးခန်းတွင်းသို့ ဝင်လာပါသည် ။ အသက်သုံးဆယ်ကျော်ခန့် သက်လတ်ပိုင်း အမျိုးသမီး တစ်ဦး ၊ သူမဧ။် အမျိုးသား ဖြစ်ဟန်တူသည့် အမျိုးသား တစ်ဦးနှင့် ၊ ၎င်းတို့ဧ။် သားသမီး အရင်းသော်လည်းကောင်း ၊ မွေးစားသားသမီးတော်စပ်နိုင်သူသော်လည်းကောင်း စုစုပေါင်းလေးယောက် ပါလာကြသည် ။ ထိုလူတို့ဧ။် သွင်ပြင်ပုံသဏ္ဍန်ကိုကြည့်ရုံဖြင့် နွမ်းပါးသော လက်လုပ်လက်စား မိသားစုဟုပင် အလွယ်မြင်နိုင်တော့သည် ။ ဆေးခန်းလာရခြင်း အကြောင်းမှာ ကိုယ်ဝန်တားဆေးလာထိုးခြင်းဖြစ်ကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင်သိရသည် ။ သက်ဆိုင်သောသူ တစ်ယောက် ၊ အတူလိုက်ပါလာသူ ငါးယောက်နှင့်ပင် ဆူညံပွက်လောရိုက်နေသည် ။
ထိုအမျိုးသမီးဧ။် အလှည့်ရောက်သောအခါ လာရင်းအကြောင်းကို မေးကာ ကိုယ်ဝန်တားဆေး (၃လကာကွယ်) ကိုထိုးပေးရသည် ။ ဆေးပြန်ထိုးရန် သက်မှတ်ထားသည့် ရက် ကျော်လွန်နေကြောင်းသိရသဖြင့် ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် အချို့ကိုပါ တဆက်တည်းပြောပြရတော့သည် ။ အသက်ငယ်ငယ်ဖြင့် အိမ်ထောင်ကျကာ မိသားစုတာဝန် ၊ကလေး ဝေယျာဝစ္စများ နေ့စဉ်လုပ်ရသဖြင့် ရက်ချိန်း မှန်မှန်ထိုးရန် မေ့လျော့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ အားပေးရန် လိုက်လာသော ကလေးတစ်သိုက်ကိုမြင်ပြီး သိချင်စိတ်ဖြစ်လာသဖြင့် ဘာတော်လဲဟုမေးမိရာ သား သမီးတွေဟုသာ ပြန်ဖြေလေသည် ။ ကျွန်တော်ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်လိုက်ပါပြီ သားဆက်ခြားခြင်း အလေ့ကျင့် မှန်မှန် မပြုမိသော ၊ သေချာ မလိုက်နာမိသော ပေါ့ဆမှုကြောင့် ကလေးတွေ အများကြီးနှင့် ပို၍ ကြပ်တည်းနေရသော မိသားစု တစ်ခုဖြစ်သည် ။
အရွယ်ရောက်ချိန်မှ သွေးဆုံးခါနီးအချိန်ထိ အမျိုးသမီးတိုင်းကိုယ်ဝန်ရနိုင်သည် ။ တစ်ချို့သော မိသားစုများသည် ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတအားနည်းသဖြင့် မကာကွယ်နိုင်ပဲ မိသားစုဝင်တိုးကာ ချို ့တဲ့စွာ နေကြရသည် ။ ထိုလူမျိုးမှ ပေါက်ဖွားလာသူများသည်လည်း ပင်ပန်းကြီးစွာဖြင့် မပြည့်မစုံ နေကြရသည် ။ ထိုလူမျိုးအတွက် လိုအပ်သော သားသမီးအရေတွက်ရပြီးလျှင် သားကြောဖြတ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နည်းဖြစ်သည် ။ ကလေးမလိုချင်သဖြင့် တားသော်လည်း တိတိကျကျ လိုက်နာခြင်းမရှိတာကြောင့် ကလေးများနေရသော သူမကိုပြောပြခဲ့သည်များကို ပြန်လည် ရေးချလိုက်ပါတော့သည် ။ အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ရာတွင် လိုအပ်သည်များကို အနည်းကျဉ်းရေးပြပါဦးမည် ။
” ကလေး လုံးဝမလိုချင်တော့သော မြန်မာနိုင်ငံသူ /သား အိမ်ထောင်သည်များအတွက် သားကြောဖြတ်နိုင်ပါသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးများ သားကြောဖြတ်လိုက အစိုးရဆေးရုံများတွင် တရားဝင် သားကြောဖြတ်နိုင်ပါသည် ။ သားဖွား မီးယပ်ဌာနရှိသော အစိုးရပိုင်ဆေးရုံတိုင်းတွင် သားကြောဖြတ်နိုင်သည် ။ ယခုတွင်မှု ဗဟို အမျိုးသမီး ဆေးရုံတွင် ဆောင်ရွက်ပုံကို ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသည် ။ တရားဝင်သားကြောဖြတ်ရန် လျှောက်လွှာ ပုံစံများကို အထက်ဖော်ပြပါ ဆေးရုံများတွင် အခမဲ့ တောင်းယူနိုင်ပါသည် ။ အင်္ဂလိပ်လို တစ်စုံ ၊ မြန်မာလို တစ်စုံ ပုံစံ၂မျိုးဖြင့် ရေးသားချက်များကို ဖြည့်စွက်ပေးရမည်ဖြစသည် ။ သားကြောဖြတ်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်လက်များကို မှန်ကန်စွာရေးဖြည့်ပေးရမည်ဖြစ်သည် ။ သားကြောဖြတ်ရန် လျှောက်ထားသူဧ။် အမည် ၊ လက်မှတ် ၊ လိပ်စာ ၊ ယခင်မွေးထားခဲ့ဖူးသော သားသမီး ဦးရေ ၊ လက်ရှိ အဖတ်တင်သော သား သမီး ဦးရေ ၊ တစ်လဝင်ငွေ ၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဧ။် သဘောတူညီချက်နှင့် လက်မှတ် ၊ ရပ်ကွက်ရုံးမှ ထောက်ခံချက် တို့ပါဝင်သည် ။ ထို ရပ်ကွက်ရုံးထောက်ခံချက်တွင် လျှောက်လွှာထဲတွင်ပါရှိသော လက်ရှိသားသမီးဦးရေ ၊ လိပ်စာ မှန်ကန်ကြောင်းပါရပါမည် ။ ထိုလျှောက်လွှာနှစ်စောင်နှင့် ဗဟို အမျိုးသမီးဆေးရုံသို့တင်ပြသော အခါ သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန် တစ်ဦးဧ။် ထောက်ခံချက် ၊ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားသော ပုံစံထဲပါရှိသွားရမည် ။ ၎င်းဧ။် ထောက်ခံချက်သည် definite medical indication ရှိရမည် ။
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံသို့ လျှောက်လွှာတင်ပြီးသောအခါ ၊ စာရေးမတစ်ဦးက လျှောက်လွှာရရှိကြောင်း ဖြတ်ပိုင်းပေးသည် ။ နှစ်ပတ်မှ တစ်လအတွင်း အစိုးရဖွဲ့စည်းပေးထားသော ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် စစ်ဆေးခြင်း ခံယူရန် နေ့ရက်၊ အချိန်ပါသော ဆင့်ခေါ်စာရောက်လာမည်ဖြစ်သည် ။ ထိုနေ့ရက် အချိန်တွင် တိတိကျကျ သွားရောက် စစ်ဆေးမှု ခံယူရမည် ။ ထိုဘုတ်အဖွဲ့က အချင်းချင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများပြုလုပ်ပြီး တိကျသေချာစွာ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပြီးကာ သားကြောဖြတ်ရန် ထောက်ခံလျှင် ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံတွင်လည်းကောင်း ၊ သားဖွားမီးယပ်ဌာနရှိသော မည်သည့် အစိုးရ ဆေးရုံတွင်မဆို သားကြောဖြတ်နိုင်သည် ။ ဘုတ်အဖွဲ့တွင် သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်များ ၊ သမားတော်များ ၊ ခွဲစိပ်ဆရာဝန်များ ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးကု ဆရာဝန်များ ၊ နှလုံးဆရာဝန်များ ပါဝင်သည် ။ ဘုတ်အဖွဲ ့ဧ။် ခွင့်ပြုမိန် ့စာ ရရှိပြီး ၅နှစ်အတွင်း သားကြောဖြတ်နိုင်သည်” ဟု ထိုအမျိုးသမီးကို ရှင်းပြခဲ့ရသည် ။
သားသမီးဆိုသည်မှာ ရတနာဟု တင်စား ခေါ်ဝေါ်ကြသော်လည်း ၊ မိဘဖြစ်သူဧ။် ပံ့ပိုးမှု အားနည်းသော အချိန်တွင်တော့ ရ-တာ-နာလေးတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတတ်ကြသည် ။ စားဖို့သောက်ဖို့ ရုန်းကန်နေရရှာသော မိဘများသည် သားသမီးဧ။် ပညာရေး၊ ဗဟုသုတနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်မှု အားနည်းတတ်သေးသည် ။ မိဘများ သားသမီးအပေါ် တာဝန်မကျေလည်း ဖြတ်ကြရသည် ။ ဘာသားရေးနှင့် စာရိတ္တပိုင်းတွင်လည်း ချွတ်ချော်မှုများ ရှိလာခဲ့သည် ။ ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ရှင်တိုင်း မိမိတို့ဧ။် သားသမီးကို သေချာစွာလေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေမှသာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မွေးဖွားသင့်သည် ထိုသို့မဟုတ်လျှင် ငယ်ရွယ်နုနယ်လှသည့် မိမိရင်သွေးဧ။် အနာဂတ်သည် မလိုလားအပ်သည့် ဘေးပယောဂများကြောင့် အညွှန့်ချိုးခံရသကဲ့သို့ အလေလွင့်ဖြစ်ကြရသည် ။ အိမ်ထောင်သည်တိုင်းဧ။် တာဝန်ကျေမှုသည် မိမိတို့သားသမီးများအတွက် အနာဂတ်ဖြစ်သည်ကို သတိပြန်ရလာစေရန် ရည်ရွယ်လိုက်ပါတော့သည် ။ ။
လက်မောင်းထဲ ထည့်ရတဲ့ ပစ္စည်းလေးအကြောင်းသိချင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီပစ္စည်းက ကလေးမရသေးရင် ထည့်လို့မရဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားခင်ဗျ။
အမလေး သားကြောဖြတ်တာတောင် ဘုတ်အဖွဲ့ ထောက်ခံစာ ရပ်ကွက်ရုံးမှ ထောက်ခံစာလိုတယ်
ဟဲ့တောင်မ စိန်ပေါက် ညည်းလဲကလေးမတရားမမွေးနဲ့ကြားလား။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေက တအားရှုပ်ထွေးပြီး ခေတ်မမီဘူးထင်တာပဲ ဒေါက်တာရေ…။
ကျုပ်သဘောကတော့ မိန်းမတယောက်ဟာ ကလေးတယောက်လဲ(တိုင်းပြည်အတွက်တာဝန်ကျေ)မွေးပြီးပြီ အသက်လဲ ၃၅ ကျော်ပြီ၊ ကိုယ့်လွတ်လပ်သောဆန္ဒအရလဲဖြစ်တယ်ဆိုရင် သားကြောဖြတ်ပေးဘို့ သင့်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
အခု အစိုးရက မလိုအပ်ပဲ ရှုပ်အောင်လုပ်ထားတော့ ရှင်းတဲ့နေရာပဲသွားကြရော …..
ဦးဦးပါလေရာရေ …. သားကြောဖြတ်တဲ့ ကိစ္စက လွယ်မယောင်ယောင်နဲ့ ခက်ပါတယ် … ဒါကြောင့်လည်း … အစိုးရအသိမှတ်ပြု ဆေးရုံတွေမှာသာ တရားဝင်ဖြတ်ခွင့်ပေးတာပါ …. ။
လူတိုင်းကို သားကြောဖြတ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ …တကယ့်ကို ကလေးများပြီး အခက်ခဲဖြစ်နေသူတွေ ၊ ကလေးဆက်မွေးဖို ့မဖြစ်နိုင်သူတွေကိုသာ လုပ်ပေးတာပါ … အဲ့လို လူတွေကိုလည်း …. ဖောင်တင်ထားတိုင်း ဖြတ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ … ကျန်းမာရေးအခြေနေ ၊ စိတ်အခြေနေ ၊ ရောဂါအခံ စတာတွေကို …. စိစစ်ပေးပြီးမှပဲ … ဖြတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပေးတာ … ။
လုပ်ဆောင်ရတာ အဆင့်တွေ များတယ်ဆိုပေမယ့် .. ကျွန်မကတော့ .. အဲ့ဒီနည်းကို ကြိုက်တယ် … ။ ဘယ်သူမဆို ပိုက်ဆံပေးတိုင်း သားကြောဖြတ်လို့ ရနေလျှင် …… မလိုလားအပ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးသွားတွေပါ … ရှိလာနိုင်တယ် …. ။
ပြင်ပ ဆေးခန်းတွေမှာ အိုဂျီနဲ့ပေါင်းပြီး တိတ်တဆိတ်လုပ်နေကြတာတွေလည်း ရှိတယ် …. ပြသနာမဖြစ်သေးလျှင်တော့ …လူမသိဘူးပေါ့လေ …. ။ သားကြောမဖြတ်ခင် အခြေနေအရပ်ရပ်ကို စီစစ်ပေးပြီးမှ …. ဖြတ်တဲ့အခါမှ … ဥပဒေအရလည်း ဘောင်ဝင်သွားပါလိမ့်မယ် …. ။
၁။ ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
အစိုးရက ထောက်ပံ့ကြွေးရေး ကြိုးစားရမယ်..။
မြန်မာပြည်ထဲ ရင်းနှီးမြုတ်နှံဖို့ ၂သိန်းယူလာသူတွေကို.. အမြဲတန်းနေခွင့်ပေးပြီး.. သူတို့ဆီက ရတဲ့ အမြတ်ခွန်ငွေနဲ့.. မမွေးသေးတဲ့ကလေး.. မွေးလာတဲ့ကလေးတွေ (မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ)ကို ထောက်ပံ့ရမယ်..။
( ဆရာဝန်ပြောတာနဲ့ လိုင်းမတူ.. စကားအတင်းစပ် ပြောခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်း…)